युभेन्टस पुगेका रोनाल्डोले कति नम्बरकाे जर्सी लगाउने छन्? | Suvadin !
युभेन्टस पुगेका रोनाल्डोले कति नम्बरकाे जर्सी लगाउने छन्?
योसंगै उनले स्पेनिस क्लव रियाल मड्रिडसँग ९ वर्षको सम्बन्ध टुङ्ग्याएका छन्। ३३ वर्षका पोर्चुगिज रोनाल्डो रियल मड्रिडका सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। उनले अहिलेसम्म रियल मड्रिडबाट ४५१ गोल गरेका छन्।
Jul 11, 2018 17:53
काठमाडाैं, २७ असार – पोर्चुगिस फुटबल स्टार क्रिश्चियानो रोनाल्डो ईटालियन क्लव युभेन्टसमा अावद्ध भएका छन्। ११२ मिलियन युरो (९९.२ मिलियन पाउण्ड) पाएपछि रोनाल्डो युभेन्टस् प्रवेश गरेका हुन्।
रोनाल्डोले रियाल मड्रिडबाट २ पटक स्पेनिस लिग र ४ पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका छन्। रोनाल्डोले आफ्नो व्यावसायिक खेल करियरमा इङ्ल्यान्डको म्यानचेस्टर युनाइटेड र पोर्चुगलको स्पोर्टिङबाट पनि खेलेका थिए। पोर्चुगलको राष्ट्रिय टोलीका लागि उनले ८५ गोल गरेका छन्।
रोनाल्डोले युभेन्टससँगको सम्झौतापछि आफ्नो जीवनको नयाँ अध्याय सुरु भएको बताएका छन्। उनले नयाँ क्लवसंगको अनुवन्धनले आफूमा उर्जा आएको समेत बताएका छन्। CR7 उपनाप समेत कमाएका रोनाल्डोले युभेन्टसमा पनि अाफ्नो रोजाइको ७ नम्बर जर्सीनै लगाउने छन्।
सर्वकालीन महंगा खेलाडीको सूचिमा उनी चौथो नम्बरमा परेका छन्। महंगा खेलाडीको सूचिमा रोनाल्डो भन्दा अघि बार्सिलोनाले १४२ मिलियन पाउण्ड तिरेर लिभरपुलबाट भित्र्याएका फिलिप कोन्टिन्हो, मोनाकोबाट गएको सिजन १६६ मिलियन पाउण्डमा लोनमा पिएसजी आएका र बार्सिलोनाबाट २०० मिलियन पाउण्डमा पिएसजी गएका नेइमार छन्।